Shabaab oo xukun ku riday nin lagu eedeeyay fal kufsi ah – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAShabaab oo xukun ku riday nin lagu eedeeyay fal kufsi ah
October 22, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Shabaab oo xukun ku riday nin lagu eedeeyay fal kufsi ah
Ururka Al Shabaab ayaa fagaare ku yaalla degaanka Towfiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay xukun karbaash ah kula fuliyeen nin lagu eedeeyay inuu ku dhacay fal kufsi ah.
Mahdi Maxamed Calasoow Maxamuud oo 17 sano jir ah ayaa lagu dhuftay 100 Jeydal kadib markii uu kufsday gabar lagu magacaabo Maryan Abuukar Axmed Mantaan oo 16 sano jir ah.
Maxkamadda Al Shabaab ee gobolka Shabeelaha Dhexe, ayaa amar ku bixisay in 100 Karbaash lagu dhufto ninka dhalinyarada ah, iyadoo ay daawanayeen dadka degaanka oo la isugu keenay fagaare wayn.
Qaadiga Maxkamadda xukunka Riday oo goob fagaare ah ka akhrinayay xukunka ayaa sheegay ninka gabadha ku xadgudbay in lagu xukumay in uu bixiyo maharka gabadha oo ah $200, sidoo kale wiilka kufsiga geystay waxaa lagu xukumay in muddo sanad ah laga masaafuriyo degaanka uu dambiga ka geystay.
Sidoo kale Qaadiga maxkamadda Shabaab ayaa uga digay dadka degaanka inay ku kacaan falal ka baxsan shareecada Islaamka, wuxuuna sheegay tallaabo sharciga waafaqsan in laga qaadi doono dadkii falkaasi oo kale ku kaca.
Ehelada gabadha falka kufsiga ah loo gaystay ayaa soo dhaweeyay tallaabada xukunka ah ee Shabaab ay sameeyeen.
Al Shabaab ayaa xukuno kala duwan ku rida dadka ay ku eedeeyaan inay galeen falalka kufsiga iyo dilalka.
651,118 total views, 5,434 views today
651,118 total views, 5,434 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
650,992 total views, 5,437 views today
650,992 total views, 5,437 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
651,021 total views, 5,433 views today
651,021 total views, 5,433 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
651,082 total views, 5,436 views today
651,082 total views, 5,436 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
651,143 total views, 5,437 views today
651,143 total views, 5,437 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]